ဘလော့မှာ စာတန်းအပြေးလေးနဲ့ ရေးကြမယ်... ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ဘလော့မှာ စာတန်းအပြေးလေးနဲ့ ရေးကြမယ်...
Thursday, November 01, 2012 Taunzalat
သည်ပို့စ်လေးကတော့ စာတန်းလေးပြေးနေတဲ့ ကုဒ်လေးတမျိုးပါ.. ကျနော့်ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတာလေးကို နမူနာကြည့် နိုင်ပါတယ်...
►3. Page Elements
►4. AddaGadget ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
►6. အောက်ကပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူ ထည့်လိုက်ပါ
<marquee direction="left" style="background: none repeat scroll 0% 0% orange;"><span style="color: rgb(255, 255, 0);"><span style="color: rgb(51, 255, 51);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 255, 102);"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-weight: bold;">မိတ်ဆွေတ်ို့ကြိုက်တာရေးပါ </span></marquee>
အောက်ကဇယားလေးထဲမှာ ကုဒ်တွေထည့်ပါ ရေးလိုသောစာသားများ အပြည့်စုံ ရေးလိုက်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ Rich Text ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံလေးအတိုင်းတွေ့မြင်ရပါမယ်... စိတ်ကြိုက် စာလုံးကာလာလေးများ ပြောင်းလိုက်ပါ။
orange ဆိုတာက နောက်ခံကာလာအရောင်ပါ။ မိမိတို့ ကြိုက်သလို ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်..
ဥပမာ ။ ။ white...black..green..yellow စသဖြင့်ပေါ့..
တို့ရဲ့ cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်...
Posted in: Blog အလှဆင်မယ်